बलिउडका चर्चित यी ६ अभिनेत्रीहरू : जो सलमान खानसँग फिल्म खेल्न चा,हँदैनन (हेर्नुहोस) – पुरा पढ्नुहोस्……
बलिउडका चर्चित यी ६ अभिनेत्रीहरू : जो सलमान खानसँग फिल्म खेल्न चा,हँदैनन (हेर्नुहोस)
बलिउड चर्चित सुपरस्टांर सलमान खान चर्चा भारतमा मात्र नभइ संसरभर हुन्छ । उनिसँग नजिकन चाहाने युवतीको संख्या असंख्य छ । बलिउडकै कुरा गर्दापनि धेरै नायिका हरू छन् जो उनिसँग फिल्ममा सँगै देखिन लालयित हुन्छन ।
तर केहि यस्ता नायिका पनि छन् । जो उनिसँग काम गर्न नै चाहदैनन् । सलमान खानको यती लामो फिल्मी जीवनमा केहि यस्ता अभिनेत्री छन जो एक पटक पछि कहिल्यै पनि सँगै काम गरेनन् ।
फिल्म ‘ओम शान्ति ओम(२००७)’ बाट फिल्मी करियरको सुरुवात गरेकी दीपिका अहिले बलिउडमा शीर्ष स्थान छिन् । तर आज सम्म दीपिका र सलमान एक पटक पनि सँगै देखिएका छैनन्।
विद्या बालनले सन् २००५ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘परिणिता’ बाट बलिउडमा प्रवेश गरेकी हुन् । अहिले विद्याको बलिउडमा देखिएको पनि १५ वर्ष भइसकेको छ। तर सलमान विद्या सँगै देखिएका छैनन।
कंगनाको बलिउडमा प्रवेश गरेको पनि धेरै भइसक्यो तरपनि कंगनालाई पनि सलमान खानसँग कुनै पनि फिल्ममा देखिएको छैन।
९० को दशककी चर्चित अभिनेत्री हुन् रविना टन्डन । सलमान खान र रविनाले ‘अंदाज अपना-अपना’ फिल्ममासँगै काम गरेका थिए। यो फिल्म सन् १९९४ मा रिलिज भएको थियो। तर त्यसपछि हालसम्म रविना र सलमान खान एकसाथ देखा परेका छैनन्।
ट्विङ्कलले सन् १९९८ मा रिलिज भएको फिल्म ‘जब प्यार किसी से होता है’ मा काम गरेकी हुन् त्यसपछि हालसम्म उनिहरू सँगै काम गरेका छैनन् ।
सलमान खानलाई जुही चावलासँग एक साथ देखिएको छैन। फिल्म दीवाना मस्तानामा सलमानले एक गेस्ट रोल गरेका थिए। उक्त फिल्ममा जुही चावला मुख्य भूमिकामा थिएन्। तर अहिले सम्म सलमान खान र जुही चावलाको जोडी फिल्ममा देखिएको छैन। -समाचारबाटिकाबाट।
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, मनोरंजन
Prevआज सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् यसरी हुँदैछ कारोबार ?
Nextआज बढ्यो डलरको भाउसँगै साउदी,कतार, दुवई लगायत यी देशका मुद्राको भाउ
पूजा शर्माको ‘रामकहानी’ कतारमा खिचियो (फोटो फिचर हेर्नूहोस्)
७ जनासंग सहयो’ग मागेका थिए रविले : अघि’ल्लो दिन कोठामा चुकुल लगाएर बसेका थिए, अन्य थप रह’स्य सहित-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
दाल भात तरकारीको नयाँ गीत सार्वजनिक, निरुता सिंह र आँचलको बबाल डान्स !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
कोरोना कहालीको भया,वह अझ बढ्ने डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको चेता,वनी (भिडियो सहित)
October 19, 2020 October 19, 2020 by admin
विभत्यस ‘ह’त्या गरेको अवस्थामा भेटिएका असई गोविन्द विकको शो’क सलामी सहित अन्त्येष्टि (भिडियो सहित)
पिडित महिलाको आरोप- बैंश हुँदासम्म श्रीमती बनाए, प्या,रालाइसिस भएपछि अलपत्र बनाएर विदेशमै लुके श्रीमान (भिडियो हेर्नुस्)
धनकुटा घटनाबारे नयाँ रहस्य बाहिरियो, छिमेकीहरुले यसो भन्छन् (भिडियो हेर्नुस्)
नविल बैंकको त्यो भि,डियो जसले छोयो नेपा, लीको मन- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आज घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको यस्तो छ आज।
पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? आज यस्तो छ अमेरिकि डलर लगायत यी बिदेशी मुद्राको भाउ…
प्रदेशी नेपालीहरुको जिवनमा आधारित टिका सानु र कविराज ढकाल सबैलाई रूहाउने गीत ‘नवस्नु है पर्खि’ (भिडियो सहित)
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार (309)
स्वास्थ्य/ जीबन शैली (583)